ग्रीष्मकालीन समय | उत्सव शिल्प | डाउनलोडको लागि निःशुल्क रंगीन पृष्ठहरू
घरको समर गर्मी ट्याग
गर्मीको तातो गर्मीको दिनको रेलको लागि सहायक हो! गर्मीको दिन तालिम एक अनुकूलन हो जुन प्यालेटिनटबाट आउँछ र अन्य आसन्न क्षेत्रहरू पनि समावेश गर्दछ। यस रंगीन खुट्टा परेडको साथमा जाडोलाई हटाइयो, पहिले पनि उनको मृत्युको परम्परा थियो।
गर्मीको दिनको परम्परा
गर्मीको स्टिकले नयाँ जीवनको प्रतीक, वसन्त र यसरी नयाँ चक्रको सुरुवात गर्दछ। समुदायको आधारमा, गर्मीको दिन तालिम ईस्टर भन्दा पहिले नै ईस्टर भन्दा अगाडि तेस्रो आइतबारमा ईस्टर भन्दा पहिले हुन्छ।
टिंकर गर्मीको दिन आफैलाई लुगा लगाउँछ
संयोगमा, लोकप्रिय कुर्फ्लास्जर कस्टमले सम्भवतः ठगठूला जराहरू गरेको छ र तपाईं सन राजा लुईस XIV को दिन पनि यो प्रमाण पाउन सक्नुहुनेछ। यो थाहा छैन कि ग्रीष्मकालीन ग्रीष्मकालीन दिनको स्पन्ट पहिले नै त्यहाँ थियो। गर्मीको दिनको ट्रेन पछि, जाडो एक विशाल स्प्रिमामा एक विशाल हिमपातको रूपमा जलाएको छ।
गर्मीको दिन के हो?
ग्रीष्मकालीन दिन छड़ी एक सरल छड़ी हो, जसलाई यहाँ स्टेकन भनिन्छ, जसले रंगीन रिबनसँग सुसज्जित छ। शीर्ष मा एक खमीर भित्तामा बस्छ र कहिलेकाहीँ पनि नयाँ जीवन र वसन्तको चिन्हको रूपमा एक उडाई अंडा पनि - यहाँ तपाई ईस्टरको सम्बन्ध देख्न सक्नुहुनेछ!
केही शहरहरूमा, सेबहरू वा सानो गुलाबहरू गर्मीको दिनमा एक परम्परा हुन्। उनको हातमा रंगीन ग्रीष्म ट्यागको साथ, बच्चाहरु विभिन्न क्लबहरु को सजाए गए क्यारियर संग। अन्तमा, निस्सन्देही, मिठाई पनीर खाएको हुन सक्छ - निस्सन्देह सबैभन्दा सानो को लागी, कहिल्यै हाइलाइट!
र यहाँ त्यस्ता रंगीन गर्मीको दिन कसरी बनाउने भनेर सरल मार्गदर्शक आउछ। यसले मूड बढाउँछ विशेष गरी जब घाँस काटने को माउन्ट अझै पनि राहण गर्न चाहँदैनन् र बच्चाहरु पहिले देखि नै वसन्त रंग को सपना देख रहे हो।
पहिलो, तपाईंलाई निम्न कुरा चाहिन्छ। एक हजेलना वा बांस स्टिक (जुन फूल पसलमा पनि उपलब्ध छ), एक जेब चाकू, अण्डा उडाएको, एक खमीर प्रहार (आदर्श रूपले बेकिएको!), धनु वा क्रेप पेपर।
पहिलो, तपाईं बच्चाहरु को लागि छडी खुल्ला छ, तब तपाईं तल देखि चिपकहरु लाई समाप्त लूप्स संग (माथि या खरीदी या पहिले देखि पनि आफ्नो द्वारा बनाईएको) भरने को लागि शुरू गर्छन। यदि तपाईं क्रेप पेपर प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ भने, तपाईं लामो रंगीन रिबनको साथमा गर्मीको दिनको स्टक पनि सजाउन सक्नुहुन्छ। यो विशेष गरी साना बच्चाहरुका लागि सजिलो छ। माथि शीर्षमा धेरै लामो क्रेप पेपर रिबन राख्नुहोस्, थोपा तल खिच्नुहोस् र खमीर पहिरेल र शीर्ष मा अण्डा राख्नुहोस् - गर्मीको दिन तयार छ।
यदि तपाईं चाहानुहुन्छ भने, तपाईं क्रेप कागजको साथ रोड लपेट गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईंको कल्पनामा कुनै सीमा छैन!